Barcelona oo dacwad ku oogtey Neymar. – Cayaaraha dunida
Barcelona oo dacwad ku oogtey Neymar.
Kooxda Kubada Cagta Barcelona ayaa lacadeeyey in ay dacwad ka gudbisey Cayaaryahankeedii hore ee Nemar kaas oo ay dhawaan ka iibiyeen kooxda PSG ee dalka France.
Barcelona ayaa warqad qoraal ah oo dacwo ah Waxa ay Gaarsiiyeen Xiriirada FIFA iyo UEFA waxayna ku dacweynayaan Neymar in ay ka helaan lacag ay si hor u maris ah u siiyeen markii uu Saxiixay heshiiska cusub ee uu kula joogi lahaa ilaa laga gaaro 2021 balse bur buray markii uu isagu dalbaday in laga iibiyo PSG.
Naadiga Barcelona ayaa Neymar ka dooneysa in uu soo celiyo €8.5m oo uu Hor u maris ahaan u qaatay markii uu Saxiixay heshiiska Cusub taas oo ku waajibtay in u bixiyo markii uu isagu codasaday in lafasaqo heshiiskii uu kooxda lagaaray Waxaa kaloo Barcelona ka dalbatay PSG in ay qaadaan mas uuliyada bixinta lacagtaas lacala hadii uu diido Neymar in uu bixiyo.
Paris Saint-Germain oo 2 Todobaad kahor Neymar ku soo qaadatay aduun lacaged gaaraya 222 million,ayaa dhankeda diyaar u ah in ay dacwad kasta ka difaacaan Cayaaryahankooda waxayna u qaban doonaan abuukatayaal heer sare ah oo Gaashaanka u daruura dacwada Barcelona ee ku socota Barcelona.